Tetika hamonjena ao an-trano sy handresena ny hantsana Janoary | Bezzia
Tetika hamonjena ao an-trano sy handresena ny hantsana Janoary
Tony Torres | 13/01/2022 10:02 | Nohavaozina amin'ny 13/01/2022 10:21 | an-trano
Ilay tehezan-tendrombohitra malaza tamin'ny Janoary toa mideza sy sarotra resena. Ho an'ny fandaniana rehetra amin'ny volana Desambra dia ampiana ny fiakaran'ny vidin'ny serivisy fototra. Ny fisondrotry ny fandaniana izay tsy maintsy atrehina ary raha tsy dinihina dia mety hanary tanteraka ny toe-karena ao anatin’ny volana manaraka.
Noho izany, ireto tetika mitahiry ao an-trano ireto dia hanampy anao handamina tsara kokoa ny fandanianao sy izay azonao handresena ny vidin'ny volana Janoary, na dia amin'ny tahiry sasany aza. Miaraka amin'ny tricks kely sy ny fiovan'ny fahazarana izay ihany koa izy ireo dia hamela anao hizara tsara kokoa ny fandaniana maharitra mandritra ny taona. Mba hisorohana ny fahatongavanao amin'ny fiandohan'ny taona hijaly amin'ny fandaniana fanampiny amin'ny volana Desambra.
1 Hetsika hamonjy
1.1 Avereno jerena ny fandanianao
1.2 Manomana sakafo mandritra ny herinandro
1.3 Mitsitsy amin'ny fanjifana angovo
1.4 Tandremo ny varotra
Ilaina ny fitahirizana, tena ilaina mihitsy aza, satria na manao ahoana na manao ahoana ny fahaizanao ara-toekarena sy ara-panatanjahantena, dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra ny tranga tsy ampoizina. Ny fananana kidoro kely voavonjy dia fiadanan-tsaina, fiadanan-tsaina izany ary fiarovana izany. Na firy na firy eritreretinao fa afaka mamonjy, satria ny karama matetika dia tena fohy ny halavan'ny volana. Ao amin'ny fahazarana mpanjifa dia ahafahanao mitahiry vola kely (na lehibe) izay ho lasa zava-dehibe amin'ny farany.
Avereno jerena ny fandanianao
Imbetsaka ny vola no mivoaka amin'ny fandaniana tsy ilaina izay tsy eritreretintsika. Mba hisorohana izany dia tena ilaina ny mahafantatra mazava tsara inona no fandaniana ilaina ary inona no tsy ilaina, satria amin'izany fomba izany no ahafahantsika misoroka ny fahaverezan'ny vola isam-bolana. Soraty ny fandaniana raikitra, ireo izay ho an'ny serivisy ary ny fandoavam-bola tsy miova isam-bolana. Raiso ny kaonty ary soraty ny vola, fa ny vola dia fandaniana mahazatra izay tsy maintsy tazonina isam-bolana.
Kajy eo ho eo ny vola lany ao amin'ny sarety fiantsenana, raha mandoa amin'ny karatra ianao dia araraoty izany mba hahazoana tarehimarika marina kokoa. Araraoty ny mijery ny kaontin'ny banky hahitanao ny fandaniana rehetra natao sy izay tsy ilaina. Tena mahagaga anao izany ny habetsaky ny vola laninao amin'ny zavatra tsy ilainaoNoho ny tsy fananana vinavina tsara fotsiny.
Manomana sakafo mandritra ny herinandro
Ny euro tsara hafa dia miditra ao anaty harona fiantsenana isam-bolana, indrindra rehefa tsy voaomana tsara ny zavatra hovidina. Zavatra lojika raha tsy izany manomana sakafo ianao amin'ny herinandro, sarotra ny manao fividianana mahomby. Tsy ny fitsitsiana sakafo no atao, na ny fampihenana ny kalitaon’ny sakafom-pianakaviana. dia momba ny alamino ny sakafo, jereo ny pantry ary manaova lisitra ny fividianana ara-drariny sy ilaina. Amin'izany fomba izany ihany koa dia misoroka ny fividianana kely mandritra ny herinandro izay misy euros maro mandeha amin'ny zavatra tsy ilaina.
Mitsitsy amin'ny fanjifana angovo
Ny angovo dia amin'ny vidiny mihoa-pampana, isan'andro dia miova ary isan'andro dia miakatra. Noho izany, tena zava-dehibe ny mahafantatra ny ora fandaniana angovo lehibe indrindra mba ahafahana mitsitsy ny faktioran-jiro. Tsotra be izany satria isan'andro mivoaka ao amin'ny BOE dia tsy maintsy mijery ny tranokalan'ny tranonkalan'ny Red Electrica de España. Ahenao ny fanjifana angovo fanampiny amin'ny fotoana faratampony, ary azonao atao ny mampihena ny faktioranao.
Tandremo ny varotra
Aorian'ny fialan-tsasatra dia tonga ny fivarotana ririnina ary toa tsy maintsy atao izany ary tsy maintsy mandany ny salan'isany ny tsirairay mba hanarahana ny antontan'isa ofisialy. Zavatra tsy isalasalana fa manampy fandaniana tsy ilaina izay vao mainka manasarotra ny fisondrotry ny volana janoary. Vidio ihany ny zavatra ilainao. Ny varotra dia tena tsara mitsitsy amin'ny zavatra ilaina. Raha tsy misy izany dia ialao ny fakam-panahy ary afaka mandalo ny volana voalohany amin'ny taona amin'ny vola any amin'ny banky ianao.
Entam-barotra ilaina sy zara raha ho an'ny ankamaroan'ny olona ny vola. Noho izany dia ilaina ny mianatra ny fomba hiatrehana azy io araka ny tokony ho izy mba hahafahany manatanteraka ny asany tsy misy olana. Miaraka amin'ireo tetika ireo dia azonao atao mianara mandany vola kely ary mampitombo ny tahiry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Tetika hamonjena ao an-trano sy handresena ny hantsana Janoary
Ireo no andiany nomena tamin'ny Golden Globes 2022
Sakafo 5 tsy tokony andrahoina ao anaty microwave